ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်ဆင် ထားဝယ်စီမံကိန်းသို့လာရောက် – Thai ex PM visited Burma | MoeMaKa Burmese News & Media
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် အထူး စီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်းသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး အီတာလျှံထိုင်း ကုမ္ပဏီသင်္ဘောပေါ်တွင် တစ်ည အိပ်ခဲ့ကြောင်း စီမံကိန်းဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
ထားဝယ်သို့ ကိုယ်ပိုင် သီးသန့်လေယာဉ်ဖြင့် လာရောက်သည့် သက်ဆင်သည် မတ်လ ၁၄ ရက် နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် ထားဝယ်မှ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားကြောင်းလည်း ၎င်းဝန်ထမ်းက ဖြည့်စွက်ပြောဆိုသည်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း၏ စကားပြန်မှာ စီမံကိန်းဧရိယာသို့ လိုက်ပါမသွားဘဲ ထားဝယ်တွင်ပင် ကျန်ခဲ့ကာ လေယဉ်မောင်း နှစ်ဦးနှင့် လေယဉ်မယ်တို့မှာလည်း ထားဝယ် Golden Guest ဟိုတယ်တွင် တည်းခိုသွားကြောင်း ထားဝယ်မြို့မှ စီးပွားရေးသမားတစ်ဦး ကပြောကြားသည်။
ထိုင်းအခြေစိုက် အင်အားကြီး ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ အီတာလျှံထိုင်းမှ တည်ဆောာက် အကောင်အထည်ဖော်နေသော (၅၈) ဘီလျံ ခန့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမည့် ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းတွင် မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးဇော်ဇော်ပိုင် MAX Myanmay ကုမ္ပဏီက လည်း ရှယ်ယာ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
အရှေ့တောင်အာရှတွင် အကြီးဆုံး ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်း ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည့် ထားဝယ် စီမံကိန်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံအား ဒေသတွင်း ကုန်သွယ်ရေးဗဟိုဖြစ်စေရန်ဟု အီတာလျံ ထိုင်းကုမ္ပဏီထုတ် စိတ်ကူးပုံရိပ် အစီအစဉ် (Conceptual Plan) တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ။
10 Responses to ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်ဆင် ထားဝယ်စီမံကိန်းသို့လာရောက် – Thai ex PM visited Burma
joe sitt on March 17, 2012 at 3:42 pm
May be survey for FDI from Middle East and his one at this project.
မောင်ဒေါင်း on March 17, 2012 at 5:07 pm
မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံးအနေနှင့် ထားဝယ်ရေနက်စီမံကိန်းအား အထူးဂရုစိုက်ပေးပါရန်…၄င်းစီမံကိန်းသည် နောင်တချိန် အာရှတွင်အကြီးဆုံး အရေးပါဆုံးဆိပ်ကမ်းဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည် ထိုအချိန်တွင် လက်ရှိ သင်္ဘောများအား ၀န်ဆောင်မူအများဆုံးပေးကာ ချမ်းသာနေသော စင်ကာပူသည် ရွာဟောင်းကြီးသာဖြစ်သွားမည် သိုဖြစ်ပါရ်ျ အလွန်အရေးပါသော ထိုစီမံကိန်းအား မိမိကိုယ်ကျိုးစီးပွားသက်သက်ဖြင့်သာကြည့်တက်သော မည်သည့်အဖွဲ့ စည်းကိုမျှအခွင့်ရေးပေးရန်မသင့်ပါကြောင်း၊ (တယုတ်၊ ဗီယက်နမ်၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ထိုင်း) နိုင်ငံမှအဖွဲ့ စည်းများအား မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှ အခွင့်ရေးမပေးမိစေရန် ပြည်သူတရပ်လုံးအား သတိပေးပြောကြားပါရေစေ..
မင်းထက် on March 18, 2012 at 8:55 am
အင်း သူများနိုင်ငံရဲဝရမ်းပြေးကိုတောင် လုံခြုံရေးပေးရတဲ့ အဆင့်ကဘာလဲ
ဆိုင်ယမ်တွေ ငါတို့မြန်မာတွေကို မလေးစားတာကြာပြီ
သူတို့က နှစ်40ကျော်လောက် အချိန်ပိုရသွားတာကိုး
အဲဒီ စီမံကိန်းက မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးအတွက်မဟုတ်ပဲ
လူနည်းစုနှင့် တိုင်းတပါးရဲ့ လက်ဝါးကြီးမအုပ်ခံရဖို့ဆုတောင်းရမှာပေါ့
Ohn on March 17, 2012 at 5:08 pm
When we worship money, we have to lick the thieves’ boots.
But both the military and the “Democratic Forces” seem keen to get money to be like what? Singapore or something. We need the help of IMF so that we can sell out quick. Rails, Roads, Ports, Pipes!!!
May be we should ask Thaksin what else we could sell. We got gold, uranuim, wolfram, timber, fish, pearls, women, young girls and boys, manual labourers. Let’s make money and build Sky Train like Bangkok.
Mon on March 17, 2012 at 6:05 pm
It’s no good sign for Burma if Thaksin, an infamous fugitive is involved inahuge project on Burmese soil. He isabig thief who stole Thai public’s money. And he sneaked into Burma, not openly, so it should beahuge concern for Burmese public as he is going to steal our soil and natural resources for his greed and power…..
Serious on March 17, 2012 at 7:38 pm
good. whatever. he have experience in big business.Learn from him.We want talent to build good burma.
Mon on March 21, 2012 at 6:55 pm
What kind of talent??? Probably, ‘How to steal public money to build another corrupted Thailand’……….
myathida kyaw on March 17, 2012 at 7:46 pm
“ သူလာတော့ ကျနော်တို့ဘက်က လုံခြုံရေးတာဝန်ယူပေးရတာပေါ့။ မကောင်းပါဘူးဗျာ။ သူများနိုင်ငံက ၀ရမ်းပြေးကို သွားစောင့်ပေး နေရတာ “ ဟု ယခင်တစ်ခေါက်ခရီးစဉ်နှင့် ပက်သက်၍ အစိုးရလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အရာရှိတစ်ဦး၊
လွှတ်တော် အမတ် များအခု ပြောတဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်အရာရှိ လောက် ခံစားမှု၇ှိ ပုံ မ၇လို့လား၊
၀ရမ်းပြေး နှင့် ဦးသိန်းစိန်အစိုး၇ ပေါင်းနေတဲ့သဘော ကို ပြည်သူတွေ ခံနေ၇တာဘဲ၊
Bala on March 21, 2012 at 6:58 am
What is the point you guys complain to him?Alots stupid WA YAN PYAY Burmese in Thailand too.
Mon on March 21, 2012 at 7:00 pm
DIFFERENT!!! Much much different. Those from Burma are not wanyanpyay as you wanted to describe, and no one stole any public money and Burma’s natural resources as your Generals and their clan did….